निषेधाज्ञाभरि बैंकमार्फत हुने सुनको आयात रोक्ने व्यवसायीको निर्णय
काठमाण्डौ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निषेधाज्ञा अवधिभर बैंकमार्फत हुने सुनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण प्रमुख सहरहरुमा सुनको कारोबार नहुने भएकोले महासंघले बैंकमार्फत हुने आयात रोक्ने निर्णय गरेको हो। भोलिबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुँदैछ भने कतिपय अन्य सहरमा लागू भइसकेको छ। महासंघका अनुसार...
काठमाण्डौ । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ स्थिर रहेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो बढोत्तरीसँगै हिजो प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५...
ओरालो लाग्यो सुनको भाउ, चाँदी स्थिर
काठमाण्डौ। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन...
अमेरिकामा बढ्यो मन्दीको खतरा, सुनमा लगानी गर्ने सही समय !
काठमाण्डौ । अमेरिकामा सन् २००७ पछि पहिलोपटक यिल्ड कर्भ तल झर्न थालेको छ, जसलाई हेर्दा लगानीकर्ताहरुका लागि यो नै सुनमा लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर हो भन्न सकिन्छ । यिल्ड कर्भमा यस्तो परिवर्तन हुनुलाई विज्ञहरुले मन्दीको संकेतको रुपमा बुझ्छन् र यस्तो अनिश्चितताको समयमा सुन नै लगानीको उत्तम विकल्प बन्ने गर्छ । भारतका सुन व्यापार विज्ञ...
काठमाडौँ । सुनचाँदी कारोबारबाट मुलुकको राजश्वमा वार्षिक आठ अर्ब योगदान हुने गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाँचौँ वार्षिक साधारण सभाको पूर्वसन्ध्यामा आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वार्षिक रु ५० अर्बको कारोबार हुने र रु आठ अर्ब राजश्व संकलन हुने जानकारी दिइयो । महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुुनारले महँगो...
अन्ततः बढ्ने भो सुनको कोटा, दैनिक ५ केजी थपिने
काठमाण्डौ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै निकट भविष्यमै सरकारले सुनको दैनिक कोटा बढाउने भएको छ । विवाहको सिजनमा देशभित्र सुनको उच्च माग हुने, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त नहुँदा तस्करीको सुनले प्रवेश पाएपछि सरकारका एजेन्सीहरुले समेत व्यवसायीहरुको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन...
सुन किन्नेहरु मालामाल, सातामै साढे ३% नाफा !
काठमाण्डौ । अमेरिका र उत्तरकोरियाबीचको बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार भाउ बढिरहँदा त्यसको प्रभावले नेपालको आन्तरिक बजारमा समेत सुनको भाउ बुम भएको छ । एकैदिन प्रति तोलामा ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भई शुक्रबार फाइन गोल्डको मूल्य प्रतितोला ५७ हजार ८ सय पुुगेको हो । बुधबारसम्म प्रति तोला ५७ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको...
काठमाण्डौ । पहेँलो धातुु सुनको मूल्य नेपाली बजारमा बुधबार पनि बढेको छ । मंगलबारसम्म प्रति तोला ५७ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको फाइन गोल्डको मूल्य बढेर बुधबार प्रति तोलामा २०० रुपैयाँ वृद्धि भई ५७ हजार ५०० पुुगेको हो । यहीकारण पछिल्लो ६ दिनमै प्रति तोला सुनको मूल्यमा १५०० रुपैयाँले बढिसकेको छ । यसरी ६ दिनको अवधिमा सुनबाट लगानीकर्ताले करिब ३...
सुनको भाउमा बुमै बुम, पाँचदिनमा रु. १३०० वृद्धि
काठमाण्डौ । पहेँलो धातुु सुनको मूल्य हरेक दिनजसो बुम हुन थालेको छ । यहीकारण पछिल्लो ५ दिनमै प्रति तोला सुनको मूल्यमा १३०० रुपैयाँको वृद्धि भइसकेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार तोलामा ३ सय रुपैयाँ वृद्धि भई प्रतितोला ५७ हजार ३ सय कायम भएको हो । भदौ १५ गते सुनको भाउ प्रतितोला ५६ हजार रहेको थियो...
उत्तरकोरियाली हाइड्रोजन बमले सुनमा बुम, केही दिनमै रु. ५८,००० पुग्ने !
काठमाण्डौ । उत्तर कोरियाले परीक्षणको रुपमा तथा अमेरिकालाई मनोवैज्ञानिक दवाब दिने उद्देश्यले पड्काएको हाइड्रोजन बमका कारण सुनको भाउ बुम भएको छ । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच बढ्दो तनावका बीच केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेको सुनको भाउ उत्तरकोरियाको परीक्षण बम विस्फोटनका कारण अझ बढ्न पुुगेको हो । तनावको अवस्था यथावत रहेकोले सुनको भाउ अझ माथि...
सुन खरीद गर्ने यसकारण बन्दैछन् मालामाल
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण बिग्रिएका कारण विगत डेढ महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य घरेलु बजारमा प्रति तोलामा ३ हजार रुपैयाँले बढिसकेको छ । साउन १ गते प्रति तोला ५३ हजार ५ सय रहेको सुनको मूल्य भदौ १३ गते ५६ हजार ५ सय थियो । भदौ १४ गते बुधबार सुनको मूल्य केही घटेर ५६ हजार ३ सयमा झरेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय...
एकैदिन एकहजारले बढ्यो सुन, डेढ महिनामा ३ हजारको वृद्धि !
कठमाण्डौ । मंगलबार सुनको भाउ प्रति तोलामा एकहजार रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार फाइन गोल्ड प्रति तोला ५५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ मंगलबार बढेर ५६ हजार ५ सय कायम भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण बिग्रिएका कारण विगत डेढ महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य घरेलु बजारमा प्रति तोलामा ३ हजार रुपैयाँले बढिसकेको छ ।...